Sida loo rakibo adeege shabakad leh Nginx + MySQL + PHP5 + APC + Spawn_FastCGI [Qaybta 1aad: Soo Bandhigid] | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo rakibo adeege shabakad leh Nginx + MySQL + PHP5 + APC + Spawn_FastCGI [Qaybta 1aad: Soo Bandhigid]
Muddo aan fogayn kahor ayaan soo sheegnay in hadda DesdeLinux (dhammaan adeegyadeeda) ay ku dhex jiraan Adeegyada GNUTransfer.com. Baloogga ayaa wax badan ka fiicnaaday xagga xawaaraha, dheecaanka, xitaa marka aan ka gudubno (ka dib markii ay midoobaan UsemosLinux) in ka badan 30.000 booqasho maalin kasta (ku dhowaad 200 isticmaaleyaal isku mar isku xiran). Sidee loogu guuleystaa waxqabadka wanaagsan ee server-ka xitaa mugga taraafikada?
Waqtigan xaadirka ah Cadaaladda (VPS halka ay blogga iyo adeegyo kale ku yaalliin) waxay leeyihiin 3GB oo RAM ah, hase yeeshe wax ka yar 500MB ayaa la isticmaalay, tani waxay suurtagal ku tahay xulashada saxda ah ee softiweerka loo adeegsanayo iyo qaabeyn ku filan oo iyaga ah. Tusaale ahaan, Apache shaki la'aan waa mid weyn oo adduunka ah, No.1 markay tahay martigelinta, laakiin si sax ah sababtaas darteed Apache had iyo jeer maahan xulashada ugu fiican. Markuu taraafikada badan yahay oo qalabka server-ka uusan run ahaantii weyneyn (Ex: 8 ama 16GB RAM) Apache wuxuu si fiican u cuni karaa RAM aad u badan taasoo ka dhigeysa server-ka waqtiyada qaarkood inay qaataan waqti aad u dheer in laga jawaabo, ama ka xun, in bartayada internet-ka ay ka baxsan tahay agab aan ku filnayn. Tani waa sababta qaar badan oo naga mid ahi ay u doortaan Nginx Apache.
3 Cafimat FicanCGI:
6 Soo koobid:
Waxaan horeyba kuugu sheegnay Nginx horaantii maqaalka Nginx: Beddelka xiisaha leh ee Apache, halkaas waxaan kuugu sheegeynaa inay tahay shebekad internet sida Apache, LightHttpd ama Cherokee, laakiin taasi marka loo barbardhigo Apache waxay u muuqataa waxqabadkeeda iyo adeegsiga qalabka hooseeya, si hufan sababtaas awgeed goobo badan oo waaweyn sida Facebook, MyOpera.com, DropBox ama xitaa WordPress.com u isticmaal Nginx halkii aad ka isticmaali lahayd Apache. Adduunyada Linux Maadaama uusan Linux ahayn kan keliya ee adeegsada Nginx, inta aan ogahay, emsLinux iyo MuyLinux sidoo kale way adeegsadaan 🙂
Khibradeyda shaqsiyadeed ee Nginx waxay soo jirtay dhowr sano, markii daruuri dartii aan u bilaabay raadinta beddelka miisaanka fudud ee Apache. Waqtigaas Nginx wuxuu ku jiray nooca 0.6 iyo iswaafajinta ay la leedahay goobaha baahida sare leh ee laga sameeyay PHP ma ahayn midka ugu wanaagsan, si kastaba ha noqotee maanta laga soo bilaabo nooca 0.9 wixii ka dambeeyayv1.2.1 waxaa laga heli karaa Debian Stable, v1.4.2 waxaa laga heli karaa ArchLinux) wax badan baa soo hagaagay, ilaa heer in qaab dhismeed sax ah iyo midowga Nginx + PHP wax waliba u shaqeyn doonaan sidii soo jiidashada.
Taxanahan casharka ah Waxaan isticmaali doonaa nooca Nginx 1.2.1-2.2, oo laga heli karo meelaha loo yaqaan 'Debian Stable repos' (Wheezy).
PHP, luqaddaas barnaamij ee in badan oo ka mid ah bogagga (iyo CMS) ay maanta la shaqeeyaan, waa aragtidayda, idaha madow ee qoyska. Taasi waa, waayo-aragnimadayda shakhsi ahaaneed, bogag waaweyn, oo leh tiro booqashooyin badan, oo leh fursado badan, shaqooyin, iwm., Haddii bog noocan oo kale ah laga sameeyo PHP waxay cuni doontaa ilo badan oo ka badan goob la mid ah oo la sameeyay, tusaale ahaan, RoR. Waayo-aragnimadaydu waxay ahayd dadkaas, PHP waa masduulaa weyn, PHP + Apache ayaa ku filan inuu liqo boqollaal iyo boqolaal MB oo RAM ah iyada oo aan baahi dhab ah loo qabin.
Sababta aan loo adeegsanin RoR, Django ama qof kale waa si fudud in DesdeLinux (balooggu, calankeenna) uu la shaqeeyo WordPress, CMS la soo saaray oo leh PHP oo na siiya waxyaabo badan oo raaxo leh, oo aynaan si fudud u malaynaynin in wax looga beddelo. muddada gaaban ama dhexdhexaadka ah, si daacadnimo ah, WordPress xitaa marka aysan qummanayn waxay noo adeegtaa waxa aan u baahanahay iyo laga yaabee in ka badan.
Ku saabsan PHP, casharradan waxaan ku isticmaali doonaa Nooca PHP 5.4.4-14 waxaa laga heli karaa Debian Wheezy (Stable)
Tani waxay noqon kartaa calaamadda su'aasha weyn ama laga yaabee, in qaarkood, qoraalka khilaafku ka dhexeeyo. Qaar badan oo aan ogahay ayaa i weydiin doona su'aasha: maxaa loo isticmaalaa MySQL oo aan loo isticmaalin MariaDB?
Arinta ayaa ah mid fudud oo aanan haysan waqti igu filan oo aan ugu huro naftayda inaan sameeyo tahriib xilligan laga bilaabo MySQL ilaa MariaDB, hijrada ah in aragti ahaan ay ahaato mid hufan qof walba, 100% wax walba waafaqsan, laakiin taasi waa… sidaan idhi, aragti ahaan. Waqtigan xaadirka ah markii aan bilaabay inaan ka guuro adeegyada FromLinux hal VPS oo aan u guuro mid kale waa inaan ka tago Apache gadaal oo u adeegsado Nginx, tani waxay muujineysaa feylasha qaabeynta kala duwan, qaabab kala duwan oo loogu dhawaaqo VHosts, rakibaadda iyo qaabeynta laga bilaabo xoqadda serverka iyo adeegyadeeda, waqtigaas kuma dari karin hawl kale liiska, sidoo kale anigoo daacad ah, waxaan u bedelay Apache in Nginx maxaa yeelay Apache ma qancin baahiyadayda, si kastaba ha noqotee, MySQL ilaa iyo hadda way qancineysaa baahidayda 100%, ma arko sababaha en Waxaan kordhiyay culeyskeyga shaqada anigoo badalaya wax horeyba farsamo ahaan aniga si fiican iigula shaqeeyay.
Mar aan sharraxay sababta aanan u rakibayay MariaDB, sidoo kale u sharax in maaddaama inta badan boggag internetku u baahan yihiin xog-ururin ay ku shaqeeyaan, maadaama ay tahay meesha macluumaad badan (ama ku dhowaad dhammaantood) ay ku kaydin doonaan. Waxaa jira qaar jecel Postgre ama qof kale, casharradan taxanaha ah waxaan ku sharixi doonaa sida ku rakib MySQL oo u diyaari isticmaaleyaal gooni ah bog kasta.
La Nooca MySQL ee aan isticmaali doono waa v5.5.31
APC waa hindise-bixiye PHP (si fudud ayaa loo sharaxay). Waxay noo oggolaaneysaa mar haddii si habboon loo qaabeeyey in hawsha PHP ay si fiican u shaqeyso, in jawaabaha ka imanaya adeeguhu ay ka dhakhso badan yihiin.
Waxaa jira waxyaabo kale oo door ah sida memcache si kastaba ha noqotee, marwalba waan isticmaali jiray APC waxaana helay natiijooyin aad ufiican. Waxaan kugula talinayaa inaad maqaalkan ku aqriso Ingiriis: Isbarbardhiga APC iyo Memcache sida keydka waxyaabaha ku jira gudaha
Waxaan ku isticmaali doonaa casharka nooca ah php-apc v3.1.13-1 sidoo kale waxaa laga heli karaa keydka Debian Stable.
Qaabkan lagu rakibayo qaabeynta shabakadda webka maahan midka ugu fiican ama aan ka yareyn, tusaale ahaan qaar badan ayaa kugula talin doona Varnish, taas oo wixii aan ka akhriyay ay ku sameyso mucjisooyin run ah maxaa yeelay wax walba ama ku dhowaad wax walba waa la keydiyaa, laakiin, kiiskeenna ma nihin Waxaan ubaahanahay in 100% ee barta marwalba la keydiyo maxaa yeelay ma dooneyno ama uma baahnin inaan aadno xad dhaafkaas Sikastaba, waan cadeeyaa, sidaan kor ku sheegay: "intaan aqriyay", shaqsiyan ma aanan isticmaalin Varnish ilaa maanta, marka kuuma siin karo 100% ra'yi ujeedo ah.
Kani wuxuu noqon doonaa casharro taxane ah oo aan ku tusi doono sida loo rakibo adeegaha shabakadda sida kan hadda ay martigaliso FromLinux (blog, forum, paste, iwm). Boggu wuxuu leeyahay booqashooyin 30.000 maalin kasta, ku dhowaad 200 oo isticmaale ayaa isla mar wada hela, xitaa marka sidaa darteed RAM ma dhaafo 500MB oo la cuno, tan qaar baa laga yaabaa inay tahay isticmaalka xad dhaafka ah laakiin ... haye, waxaan haynaa 3GB oo RAM ah, oo ka yar 500MB (taas oo waxaa ka mid ah FTP, SSH, iwm) runti ma fiican tahay sax? 🙂
Dhamaan 'sixirka' laguma sameeyo oo kaliya Nginx + Spawn_FastCGI + APC, nidaamkayaga qaawan ee blog ayaa runtii si fiican loo habeeyay sharciyada Nginx waa sax, tani waxay ka dhigaysaa balooggu xitaa marka uu helayo hanaan badan oo taraafikada ah oo aad uga yar PHP wixii caadiga ah, maadaama ay horey wax badan u keydsan tahay. Haddii aad leedahay goob baahi sare leh oo aad haysato dhibaatooyin kheyraad, waxaan kugula talinayaa inaad barato si aad u aragto nidaamka keydinta ee sida ugu fiican kuugu shaqeyn doona, midka ku habboon baahidaada.
Waxaan rajeynayaa inaad casharradan aad ka heli doontid mid xiiso leh, mid kasta oo ka mid ah waxaan isku dayi doonaa inaan wax walba ugu sharraxo si dhammaystiran, faahfaahsan iyo sida ugu fudud ee suurtogalka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Sida loo rakibo adeege shabakad leh Nginx + MySQL + PHP5 + APC + Spawn_FastCGI [Qaybta 1aad: Soo Bandhigid]
Aad u fiican oo cad! Waan kugu hambalyeynayaa!
Cashar aad ufiican.
Waxa aniga shaki iga buuxiyay waa sida ay u qaabeeyeen serverka emaylka.
MailServer waa wax kala fog, yacni, waxba kuma laha adeegaha webka sidaad ogtahay 🙂
Si kastaba ha noqotee, waqti dheer kahor waxaan go'aansaday inaanan isku kicin dhibkeyga MailServer, waxaan doortay inaan isticmaalo iRedMail (taageerada MySQL, LDAP iyo Postgre) iyo goobaha saxda ah iyo faahfaahinta aan ku daro feylka qaabeynta, wax walba si fiican ayey u shaqeeyaan.
Waan jeclahay maqaalka, waxaan sugayaa taxanaha maqaalada
Waad ku mahadsan tahay, waxaan rajeynayaa inaan keeno tan xigta Isniinta ama Talaadada, waxay la macaamili doontaa rakibidda iyo qaabeynta Nginx.
Aad ayuu u wanaagsan yahay, qaabeynta saxda ah, way adag tahay in la helo, tanaasulka u dhexeeya sababaha ayaa mararka qaar ku dhowaad aan la xallin karin, sidoo kale waxaan aaday nginx wax yar ka hor iyo ka dib mariadb (dhowaan, waxaan u maleynayaa sanad ka hor).
// sidaan soo sheegay way fiicnaan lahayd haddii aad kor u qaaddo suurtagalnimada chroot, oo aad isticmaasho proxy_cache_path oo waliba waxtar leh. Sidoo kale isbarbardhiga godka (xaaladaha ay macquul tahay) ee ka dhanka ah dekedda. oo si fiican u qeex tirada carruurta / wan.
Waad ku mahadsantahay faalladaada 🙂
Haa dabcan, way fiicnaan laheyd in la qariyo Nginx si looga dhigo mid gooni ah sida nidaamka intiisa kale, kama aanan fikirin suurtagalnimada casharradan, waan arki doonaa waxa aan sameyn karo. Ku saabsan habka loo yaqaan 'proxy_cache_path', waligey ma aanan isticmaalin, xoogaa ayaan ka aqrin doonaa si aan u arko sida ay wax u socdaan.
Marka laga hadlayo tirada dunta (min & max), qaabeynta Nginx si cad ayaa loo qeexay, boostada Nginx wax badan ayaan ka hadli doonaa feylka .conf 😉
Mar labaad, waad ku mahadsan tahay faalladaada.
Noocaan HowTos ayaa ah waxa ka dhigaya shabakada runti inay awood u leedahay saynisyahanada kombiyuutarka maadaama ay noo keydineyso tanno saacado ah oo cilmi baaris iyo baaris ah illaa iyo inta aan ugu dambeyn go’aansano xulashada ku habboon, mahad badan!
Hal su'aal, tani ma waxay ku socotaa Debian? Waa maxay nooca OS iyo xirmooyinka?
Xaqiiqdii, boggaga soo sheega, ee ku celceliya kuna soo celiya wararka horeyba way u badan yihiin ... waxa loo baahan yahay waa baraha lagu dhigo casharro, taasi waa waxa uu webku u baahan yahay!
Haa, Debian Wheezy (Stable current), noocyada xirmooyinka ayaa ku yaal boostada are
Faallo aad u fiican. Aan aragno haddii aan sameeyo nooc ka mid ah Errata oo leh ZPanel X, iyo si kadis ah, u samee rakibida gacanta Debian Wheezy.
Horey u soco KZKG ^ Gaara !!!, in Qiyaasta ugu Fiican ee Runtu tahay Ku Dhaqan, waxaadna khibrad u leedahay waxa aad qorto. Degel xirfadle ah oo shaqeeya. Horyaalka Kubadda Cagta ee Horyaalka, Dude.
Taasi waa run. Sidoo kale, markii aan bilaabay inaan la ciyaaro server-yada websaydhka ee aan ku rakibo Windows, runtu waxay tahay in Apache ay ka soo baxaan xagga isticmaalka kheyraadka haddii aad isticmaasho WordPress (Drupal waxay ku baabisay kalabar kheyraadka).
Waxaan u maleynayaa in qaybta Nginx casharradan ay aniga igu anfacayaan. Hadda waxaan rabaa inaan ku rakibo adeege Nginx, php, Varnish iyo MariaDB. Laakiin dabcan, waa inaad bilowdaa, caajisnimaduna wax badan ayey qaban kartaa markay tahay la dagaallanka server-yada iminkana waan ku faraxsanahay laambadda iyo xusuusta caadiga ah ee aan haysto xDD.
Weyn, kaliya mid ka mid ah kuwan ayaa waxtar u yeelan kara 🙂 Mid kale ayaa rajeynaya.
Waan ku raacnaa. Waxaan hadda ka bilaabeynaa adduunka shabakadaha internetka. Waxaan ka iibsanay labo marti-qaade, saaxiibna wuxuu naga caawiyay inaan ka hagaajino xoqida (PHP, MySQL, Apache). Waa iskudhafka kaliya ee loo isticmaalo Linux, oo ah barxad aan kusugnaa tan iyo Janaayo.
Laakiin aad ayaan u xiiseynayay mowduucan. Farxad!
Jawaab Iván Gabriel Sosa
Weligay ma rakibin shebekad websaydh laakiin haddii aan rabo inaan sameeyo, su'aal, heerka lagama maarmaanka u ah in la fahmo casharrada oo rakibo miyuu sarreeyaa mise aqoon aasaasi ah miyaan isku dayi karaa? Waad ku mahadsantahay horay.
Runtu waxay tahay inaysan u baahnayn aqoon badan si ay u awoodo inay maamusho server keydka macluumaadka. Mid horey u tijaabiyay khibradaas ayaa kuu sheegaya.
Waad salaaman tihiin, waa wax aad u wanaagsan waxaad ku samayn doontaan taxanahan taxanaha ah.
Waxaan dhawaan rakibay Nginx + Php Fastcgi + Mariadb. Nginx.
Waxaas oo dhan, waxaan ku sameeyay Archlinux, maxaa yeelay qaybintaas ayaa ah tan kaliya ee aragtidayda ka muuqata, taas oo aan u keenin wanaag badan kuwa kale. Waxaan galiyay jawi qafis ah waxayna i siisay dhibaato badan inaan si fiican u shaqeeyo.
Hadda si fiican ayey u shaqeysaa. In kasta oo aan xiiseynayo inaan ogaado fikradahaaga, ee ku saabsan carruurta iyo howlaha aabbaha, talooyinka badan ee ay isiiyaan, ayaa sii fiicnaanaya.
Waxaas oo dhami waa u dhaqan ahaan.
Qalabku wuxuu leeyahay 4GB wan oo DDR2 ah iyo processor 2Ghz Core 2.4duo ah.
Salaan kadib waxaan rajeynayaa qoraalada soosocda ee taxanahan.
diiwaanka lacagta dijo
200 isticmaale isku mar?
Kaliya waqtiyada qaarkood ee maalinta, sax? Sababtoo ah haddii kale way ka badnaan lahayd booqashooyinkaas maalinlaha ah ee 30.000.
Haa, dabcan, had iyo jeer ma jiraan 200 qof oo khadka tooska ah, xilligan xaadirka ah waxaa jira ku dhowaad 40 maxaa yeelay wali waa xilli hore, saacado yar ayay ka badnaan doonaan 100.
Kaliya madadaalo ahaan waxaan ka bedelay lighty ilaa nginx oo ku taal goobteyda shaqada (Symfony2 hadda), waxaan ka soo qaatay halkaan , aad u fudud.
Sugaya sii wadida tan 😀
Toddobaadkan waa inaan daabacaa, mahadsanid akhriska nos
iyo? wax badan ayaa ka dhiman?
Ka jawaab caafimaadka
QEYBTA KHATARTA EE MASHRUUCA ISKUULKA AYAAN KU DARSADAA NGINX IN OPENBSD 5.4 IN ORACLE MV VIRTUALBOX IN AAD UU ISTICMAAL KARO PHP, MYSQL IN KALE, NADAMAS AAN AAN U AQOONSAN IN AAN HELO MACLUUMAADKA KU SAABSAN ANIGA SII SARE.
Ku soo jawaab NOEL IVAN
Mari0: Dib ugu noqoshada waagii hore, laakiin steroids
[Ku rakibida qoritaanka] Sida loo rakibo Antergos oo aadan u dhiman isku dayga